KhunMoung ' s: New Zawgyi-One 2008
၂၀၀၈ အတွက် လက်ဆောင်ဆိုပြီး ဇော်ဂျီကနေ ပြောင်းလဲမှုဆန်းသစ်မှု များစွာနဲ့ ဖွန့်အသစ်၊ ကီးဘုတ်လက်ကွက်အသစ်တွေကို ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ "ဇော်ဂျီကို အမြဲ ဖရီးပေးမည်" ဆိုတဲ့မူအတိုင်း ဖရီးပါ။ ကီးဘုတ်လက်ကွက်ပရိုဂရမ်ကို 32,64 Archi နှစ်ခုလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ 20071230ရက်စွဲနဲ့ 2008 ကို ကြိုဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကီးဘုတ်သွင်းဖို့အတွက် ကီးဘုတ်ဇစ်ကိုဖြည်ပြီး Installer Package သုံးခုပေါ်လာတဲ့အထဲမှာ မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Installer ကို ရွေးပြီး Install ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသောကွန်ပျူတာများ ဖြစ်တဲ့ Intel x86 family 32-bit CPU တွေအတွက် ZawgyiL_i386 ကိုရွေးပြီး Install ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Installer Package နှစ်ခုကတော့ AMD 64 နဲ့ IA-64(Itanium Family) တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးက Setup (Keyboard Layout Creator Bootstrap) ကိုရွေးပြီး Install လိုက်လည်း ရတာပါပဲ။ ကွန်ပြူတာနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် Application Extension ကို အလိုအလျောက် ရှာသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အသေးစိတ်တွေကို ဇော်ဂျီဒေါ့နက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
A May 30, 2008 at 3:13 AM
Hello Khun Moung,
May I ask you one issue regardsing Zawgyi and IE? I use Vista and IE7in my personal computer. Used XP Pro and IE-7 at office. I can see all blog posted with Zawgyi. But other computers have W2K and IE-6 installed with Zawgyi font still can't read Blogs and other web with Zawgyi. My question is "Is zawgyi require IE-7?" Please let me know. Sincerely, ASM
KhunMoung May 30, 2008 at 3:49 AM
For IE6, there isapost written by Saturngod http://tinyurl.com/5h7je6 .You may need to useastyle sheet in IE6 options to view Zawgyi-One font properly in Myanmar Blogs.As far as I know, IE7 is available only for WinXP SP2 and later, and so you can't upgrade to IE7 in W2K and you may need to change some IE options.